news2dago | Aogositra 2008 | 3
[Ankapobeny ] 05 Aogositra, 2008 09:08
Vako-drazana sy hira gasy.
Voizina indray ankehitriny ireo vakoka sy kolotsaina malagasy izay tena mampiavaka ny malagasy @ ireo firenena hafa. Nomeny kaominina hilalaovana hira gasy sy vako-drazana mantsy ny kianja maintso eo Ambohijatovo isak'alahady ary dia vory eo daholo ireo sangany @ ity vako-drazana ity. Ny fanontaniana apetrako fotsiny dia ny oe fa inona tokoa moa no mampiavaka sy maha samihafa ny hira gasy sy vako-drazana e? misy afaka manome fanazavana ve? Izaho mantsy ohatrany manafangarao an'ireo foana! lol.
Nitsidika ny tetsy @ lapan'ny tanana kosa ireo orinasa namaly ny tolobidy @ fanarenana ny lapa ka orinasa lehibe 7 no namaly ny antso t@ izany. Voalaza moa fa atao mangarahara tanteraka ny fizotra ny asa sy ny tolotra omena izay mahazo ny fanorenana ny lapa. Etsy andaniny kosa anefa dia nilahatra ary nilanja sora-baventy ireo mpivarotra amoron-dalana etsy Behoririka omaly. Andrasa indray izay ho tohiny ny dinika eo @ mpivarotra sy ny kaominina.
Mavaivay kosa ny fifaninana eo @ ireo mpivarotra solika eto an-drenivohitra. Tsapa mantsy fa milahatra izay tsy izy ny fiara maka solika eny @ ireo mpivarotra shell rehetra ary tsy maharaka indray aza ny tolotra omena ny mpanjifa satria dia 200 Ar be izao ny elanelam-bidy misy eo aminy sy ny mpivarotra solika hafa. Fahiny mantsy dia mitovy foana ny vidiny solika na aiza na aiza no ividianana izany tsy hita izay antony hitsinjarana azy oe Total na Jovenna na shell na Galana...fa izao kosa tena misafidy ny olona ka izay zakany ihany no vidiny.
[ (3) Hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ] | [Rohy maharitra]
[Politika ] 04 Aogositra, 2008 09:07
Anisany zavatra mba nanitikitika ny saiko ny naheno t@ fahitalavitra fa misy izany " Fondation Ravalomanana" izany ary any amerika ny foibe toerana misy azy ity. Izay aloha no henoko t@ ilay fahitalavitra ary io no manome ireo vola rehetra ilain'ny mpianatra nahazo ny vatsim-pianarana avy any @ filoha ny repoblika. Tsy latsa danja @ ireo olobe eto an-tany izany ny filoha malagasy fa mba manana ny azy ihany koa ary io dia toetra tsara @ ity filoha ity mihitsy ilay tsy mena mitaha @ hafa. Eo ohatra ny " Fondation Clinton" izay miady @ fianahany Sida eo koa ny "Fondation Bill Gate" sy ny "Fondation Oprah"... Samy manana ny fomba hanampiana ny sahirana sy ny mahantra moa iretsy farany. Asa na inona kosa no fepetra takina mba azoana ilay vatsim-pianarana @ "Fondation Ravalomanana"? Mbola hanadiady ny momba izay aho @ manaraka.
Hanainga ho any Suede kosa moa ny filoha ary avy any izy dia hiazo an'i Beijing hanokatra ny lalao olimpika. Miandry voan-dalana indray izany ny valala be mandry. Marihina moa fa hiaraka @ filoha any shina ireo atileta malagasy nahazo ny medaly volamena rehetra t@ lalao ny nosy.
Nanatrika ny fanamarihina ny niorenany ny toby ny mpihofana ho mpiandry any Karilmalaza moa ny filoha t@ herinandro lasa iny ary teny Imerikasinina kosa izy omaly maraina nanatrika ny fotoam-pivavahana tao @ Egilizy Notre Dame de Mont Carmel, izay fiangonana vao namboarina. Manamafy ny fiarahana miasa eo @ fanjakana sy ny fiangonana moa izao fihetsiny izao.
Nafindra eny Tsiafahy kosa i Pety Rakotoniaina rehefa avy notsaboina tao @ hopitaly Befelatanana. Mbola misitery moa ny antony namindrana azy any Tsiafahy h@ izao.
Jereo koa eto
[Ankapobeny ] 01 Aogositra, 2008 09:00
Manao ahoana i Zain!
Hiova anarana manomboka androany ny Celtel Madagascar na ilay mpamongady @ serasera sy antso @ finday. Tsy ny eto Dago ihany anefa fa any @ tranobe reniny mihitsy no miova manomboka androany. Vao maika hafana izany ny fifaninana eo @ Orange sy Telma ary i Zain ka hisonanika ny mpanjifa hisafidy izay tiany. Mety hajifa koa anefa ny vola ao ampaosy hividianana ny fahana.
Tsy mahazo mandeha @ andro hariva intsony ireo sambo kely fripy izay angaha no azo ilazana azy sady akaiky kokoa @ zavatra fividiny ny malagasy. Izay aleha tokoa mantsy izao dia fripy avokoa ny lalana rehetra eny @ 67 ha ohatra dia misy mivarotra eo @ sisin-dalana eo ny kojakoja an-dakozia toy ny frigo, fatana, lafaoro, fanaka sy ny sisa. Toy izany koa ny vavahady ny zone franche iray etsy Andraharo misavovona ohatrany eny Isotry ireny ny fivarotana fripy. Tsy atao mahagaga moa izany satria izany no sahaza ny vola miditra @ fianakavina iray. Fa hiverenako @ izay ilay didy mandrara ny fivoahany sambo @ hariva satria dia nisy foana ny loza tato anatin'ny iray volana monja dia efa mahery ny roampolo ny maty sy tsy hita noho ny sambo rendrika ka hentitra ny fanjakana raha namoaka io didy io.
[ (10) Hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ] | [Rohy maharitra]
«Mialoha 1 2 3
Henakisoa sy Mananasy
Misaotra anao aho ry Fiaradalamby tena manga oa ny dia
Fikasana hanolana safidim-bahoaka « Version 2013 »
Tokony ho lany i JLR